ဘေဘီလေး လေနာမဖြစ်စေဖို့ မေမေ ဘာတွေရှောင်စားရမလဲ ....... - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေးတွေမှာ အဖြစ် အများဆုံး ကျန်းမာရေး ပြဿနာတစ်ရပ်က လေနာ တာပါ။ လေနာတာက ကလေးတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာပါ။ ကလေးက ညနေဘက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါ အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ ငိုနေတာက လေနာတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပါ။
ဘေဘီလေးတွေက မွေးဖွားစမှာ လေနာကို ခံစားရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မွေးဖွားပြီး ၂ ပတ်လောက် ဒါမှမဟုတ် ၃ လ၊ ၄လလောက်ရောက်မှ ဘေဘီလေးက လေနာ တာကို ခံစားရတာပါ။
လေနာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ တိတိကျကျမရှိပါဘူး။ နာချင်တဲ့ကလေးမှာ နာပြီး လပိုင်းလောက်နေရင် အလိုလိုပျောက်သွားပါတယ်။ တချို့ကလည်း မေမေရဲ့ စားသောက်မှု ပုံစံကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို မိခင်နို့အပြင် နို့မှုန့်ပါ သောက်နေတဲ့ ဘေဘီလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ ဘေဘီလေးသောက်သုံးနေတဲ့ အာဟာရမှုန့်တွေထဲမှာ ကလေးနဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့အရာတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ နို့နဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ကလေးတွေမှာ လေနာဖြစ်သလို လက္ခဏာတွေပြတတ်ပါသေးတယ်။
မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်းပဲ သောက်သုံးနေတဲ့ ဘေဘီလေးတွေမှာ လေနာ ခံစားရတယ်ဆိုတာက မေမေရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကြောင့်လားဆိုတာ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးက လေနာနေတာလား ……
ဘေဘီလေးတွေ ငိုနေတိုင်းတော့ လေနာနေတယ်လို့ တထစ်ချ ဆိုလို့ မရပါဘူး။ လေနာတဲ့အခါ ကလေးမှာ ငိုတာနဲ့ အတူ အခုလို လက္ခဏာလေးတွေ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်ကြွက်သားလေးတွေတင်းနေရင် ဘေဘီလေးက လေနာနေတာပါ။
ဒါကတော့ အတိအကျပြောလို့မရပါဘူး။ တချို့ကလည်း တိုက်ဆိုင်တာ ရှိသလို တချို့က အမေစားတဲ့ စားတဲ့အစားအစာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာလည်း တူချင်မှ တူမှာပါ။ တချို့က အမေ ကြက်ဥစားရင် လေနာတယ်။ တချို့က အမေ ဂေါ်ဖီထုပ်စားရင် လေနာတယ် စသဖြင့်ပေါ့။
ဒါကြောင့် ကလေးလေနာတတ်တဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေက တစ်နေ့တာ ကိုယ်ဘာစားလဲဆိုတာကို စာရင်းလုပ်ထားပါ။ ဘာစားတဲ့နေ့ဆို ကလေး လေပိုနာသလဲ။ တစ်ခါလည်း နှစ်ခါလည်း မဟုတ်ဆိုရင် ရှောင်ကြည့်ပါ။ ရှောင်ကြည့်လို့ သက်သာရင် ကလေးနို့တိုက်နေသရွေ့ ရှောင်လိုက်ပါ။
ဘေဘီလေး လေနာမဖြစ်စေဖို့ မေမေ ဘာတွေရှောင်စားရမလဲ …….
မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်းကို အားကိုးနေရတဲ့ ဘေဘီလေး လေနာမဖြစ်စေဖို့ ဆိုရင် မေမေတို့အနေနဲ့ နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ဒါလေးတွေကို ရှောင်စားဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါက ယေဘူယျပဲ ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကလေးက ဘာစားရင် လေနာတတ်လဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မှတ်ထားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နို့တိုက်နေချိန်မှာ မေမေ့အနေနဲ့ အချိုရည်တွေ မသောက်သင့်ပါဘူး။ အချိုရည်တွေ သောက်သုံးတာက ကိုယ်တွင်းမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ တိုးစေပြီး ဘေဘီလေးကို လေနာတာအပါအဝင် အခြားသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ အချိုရည် သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် အသီးဖျော်ရည်၊ သံပုရာရည် စတာတွေကိုပဲ သောက်သုံးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီတို့လိုမျိုး ကဖင်းပါတဲ့ သောက်စရာတွေက လေထတာ လေပွတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မေမေ့ အနေနဲ့ ကဖင်းပါတာတွေကို သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ဘေဘီလေးမှာ လေပွတာ၊ လေနာတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပဲလွန်း၊ ပဲပိစပ်တို့လိုမျိုး ပဲတွေက ဘေဘီလေးကို လေပွစေနိုင်သလို လေနာတာကြောင့် သက်တောင့်သက်သာ မရှိတာမျိုး ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
နို့တိုက်နေချိန်မှာ အားဖြည့် အချိုရည်တွေ သောက်သုံးတာက ဘေဘီလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် မေမေ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို ဘေဘီလေးကိုလည်း လေနာစေနိုင်ပါတယ်။
အပူအစပ်တွေက ခံတွင်းတွေ့စရာ ဆိုပေမယ့် ဘေဘီလေး ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဘေဘီလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အသင့်စား သရေစာတွေက အာဟာရ ပါဝင်မှုနည်းပြီး တာရှည်ခံ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်မှု များတာကြောင့် ဘေဘီလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သလို ဘေဘီလေးကို လေနာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နို့ များများသောက်ပေးတာက နို့ထွက်ကောင်းစေတယ်လို့ ယုံကြည်မှုတွေ ရှိကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဒီ အယူအဆ မှန်တယ်ဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။
နို့ နဲ့ နို့ထွက် ပစ္စည်းတွေ အများကြီး စားသုံးတာက မေမေ့ကို အစာမကြေ ဖြစ်စေနိုင်သလို ဘေဘီလေးကိုလည်း လေနာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အခွံမာသီးတွေက ပရိုတင်းနဲ့ အဆီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုပေမယ့် အယ်လ်မွန်စေ့ နဲ့ သီဟိုဠ်စေ့လိုမျိုး အခွံမာသီးတွေက ဘေဘီလေးကို လေထစေနိုင်ပါတယ်။
ဥအမျိုးမျိုးက အာဟာရ ကြွယ်ဝတယ်ဆိုပေမယ့် ဥတွေရဲ့ အကာတွေက ဘေဘီလေးကို လေနာစေနိုင်ပါတယ်။
နို့တိုက်မေမေအနေနဲ့ အာဟာရ ပြည့်အောင် အသီးအရွက်တွေ စားပေးရမယ်ဆိုပေမယ့် ဂေါ်ဖီ မျိုးရင်းဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်တွေက ဘေဘီလေးကို လေနာစေနိုင်တာကြောင့် နို့တိုက်မေမေတွေအနေနဲ့ မစားသင့်ပါဘူး။
တစ်ခုရှိတာက လေနာတာကို ကာကွယ်လို့ မရပါဘူး။ နာချင်တဲ့ ကလေးက နာကို နာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ကလေးလေနာတာကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး အစားတွေ ကြိုပြီး မရှောင်သင့်ပါဘူး။ နို့စို့ကလေးက လိုအပ်တဲ့အာဟာရမှန်သမျှကို မိခင်နို့ဆီက ရနေတာကြောင့်ပါ။
Foods to Avoid While Breastfeeding to Prevent Colic in Babies https://parenting.firstcry.com/articles/foods-to-avoid-to-prevent-colic-during-breastfeeding/ Accessed Date 29 October 2021
Diet, Breastfeeding, and Colic https://www.mottchildren.org/health-library/hw31265 Accessed Date 29 October 2021
Can I Eat That? I’m Breastfeeding https://www.webmd.com/parenting/baby/ss/slideshow-breastfeeding-foods Accessed Date 29 October 2021